देउवाको ‘ब्रिफकेस’ राजनीतिको भण्डाफोर गर्छु – कांग्रेस नेतृ रिता खनाल
Friday, 21 Dec, 2018 8:17 PM
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक एक हप्तादेखी जारी छ । विधान मस्यौदामा छलफल गर्न देशभरिबाट भेला भएका महासमितिका सदस्यहरुको हातमा अहिलेसम्म विधान मस्यौदा परेको छैन । समझदारी विपरित शिर्ष नेताले विधानमा सहमति गरे भन्ने बाहिर प्रचार हुन थालेपछि उनीहरु झनै रुष्ट बनेका छन । पार्टी सभापतिले एकलौटी आफ्नै गुटलाई अझै प्रश्रय दिएको ठहर गदै कतिपय नेताहरु उनका बिरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउने मुडमा छन् । यिनै समसामयिक बिषयमा चक्रपथ डटकमका लागि कविता अधिकारीले कांग्रेस नेतृ रिता खनालसँग गरेको कुराकानी :
एक हप्तादेखी जारी महासमिति बैठकमा विधान मस्यौदा पारित भएको हो ?
पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा बाहिर के भन्नु । आज एकहप्ता भईसक्यो । हाम्रो हातमा विधान मस्यौदा परेको छैन । बाहिर चाँहि विधान मस्यौदा पारित भयो भन्दै हल्ला गरिएको छ । तर विधान मस्यौदा भनेको महासमितिका सदस्यहरुले पास गर्ने हो ।
नेताहरुको सहमति नभई विधान मस्यौदा कसरी आयो ? विधान मस्यौदा आयो भनेर सभापतिका गुटका केही व्यक्तिहरुले भने होलान् तर समग्रमा विधानको मस्यौदा पारित भएकै छैन । विधान मस्यौदा किन परेको छैन भने १४ औ महाधिवेशनलाई इंगित गरेर पार्टीको वडा तहदेखी केन्द्रीय तहसम्म कसरी आफनो गुटलाई खडा गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले बन्द कोठामा जोड घटाउ भइरहेको छ । विशेष गरि पदाधिकारीको संख्यामा कुरा मिलिरहेको छैन ।
रामचन्द्र पौडेल समानुपातिकाको मुद्दामा नकारात्मक छन भनेर आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई नकारात्मक रुपमा उचाल्ने काम सभापतिले गरिरहेका छन । त्यहाँ भित्रको कुरा के छ भने रामचन्द्र पौडेल पक्ष समावेशी कुरामा नकारात्मक छैन । उनी के भनिरहेका छन भने समावेशी हुनुपर्छ तर समावेशीलाइ दोस्रो दर्जामा राख्न पाइदैन । उसलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट ल्याइनुपर्छ ।
तर यहाँ त सभापतिले निर्वाचनबाट ल्याउँदा एउटा व्यक्ति ल्याउनुपर्ने ठाउँमा २० जनालाई ल्याउँछु, महासचिव बनाउँछु, कोषाध्यक्ष बनाउँछु भनेर चलखेल गरिरहेका छन् । आर्थिक चलखेल भएको छ । हामी त्यो चलखेलबाट मुक्त हुनुपर्छ । यतिबेलासमम्म विधानको मस्यौदा आएको छैन । कार्यकर्तालाई थर्काएर पठाउने ? केन्द्रीय कार्यसमितिमा आफ्नो प्रचण्ड बहुमत छ भनेर महासमितिमा थर्काएर घर पठाउने त्यसपछि रामचन्द्र पौडेलको टिमलाई पार्टीमा बहुमत छैन भनेर थर्काउने प्रयास भएको छ । तर हामी त्यो मान्न तयार छैनौं । यदि त्यस्तो गरियो भने हामी पार्टी सभापतिको राजिनामा माग गछौं र विशेष अधिवेशनको आह्वान गर्छौ ।
तर हिजो रातीको पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकमा त विधान मस्यौदा पारित भयो भन्ने खबर आयो । के त्यो नेताहरुको सहमति विनै आयो ?
सभापतिको गुटका नेताहरुले भन्नुभयो होला । तर हामी सन्तुष्ट छैनौ । भोलि दिउँसो ११ बजे अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने भनिएको छ । अव विधानमा हाम्रा आवाज नसमेटिए सभापतिविरुद्ध भण्डाफोर गर्दै व्यापक हस्ताक्षर अभियानमा हामी लाग्छौ । नेताहरुको सहमति भएको पनि छैन यदि भयो भनेपनि विधान मस्यौदा त महासमितिमा पारित हुनुपर्छ । त्यस्तो त केही भएकै छैन । अहिले सम्म शिर्ष तहका नेताहरुसँग त्यसबारेमा गम्भिर छलफल भएको पनि छैन र भोलिबाट नै हामी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गछौ ।
सभापति देउवा बिरुद्ध यति आक्रामक किन ? के विधानमा सभापतिले मनोमानी गरेको हो ?
अव मलाई सभापतिसँग डर लाग्दैन । किन डराउनु मलाई त पार्टीले मुत्युदण्ड दिइसक्या छ । मृत्युदण्ड दिएको व्यक्तिलाई बोल्न डर लाग्छ, लाग्दैन ? मैले आज नेपाली कांग्रेसमा रहेर राजनीतिक गरेको ३५ बर्ष भयो । मेरो जीवन कालमा आज म देशमै राम्रो कामगर्ने कार्यकर्तामा पर्छु । म भन्दा साना बहिनीहरुले पटकपटक अवसर पाएका छन् । मेरो नाम समावेश हुँदा पटकपटक काटिन्छ । कपोकल्पित कुरा बनाएर मलाई पन्छाउने काम भएको छ । यति बेला मेरै जिल्लाको कुरागर्ने हो भने एउटै व्यक्ति पटकपटक चुनाव लडेको छ । त्यसको धरौटी जफत भएको छ । फेरि त्यही व्यक्तिलाई समानुपातिमा ल्याउने कोसिस गरिएपछि बिरोध भयो । त्यो भन्दा ठुलो प्रतिनिधिसभामा लगेको छ । हिजो मन्त्री बनाएको छ ।
हिजो चुनावमा ठुलो मतान्तरले चुनाव हार्दा खेरी फेरि त्यही व्यक्तिलाई सम्मानका साथ मनोनित गरेको छ । पार्टीको र सत्ताको सम्पुर्ण व्यक्तिहरु आफनो गुटको नेताका लागि के के दिदा त्यो व्यक्तिको राजनैतिक हैसियत माथी उठ्छ । त्यसका लागि महिरहत्ते गरेर सभापतिले काम गरिरहनुभएको छ । तर त्यही जिल्लामा रात दिन खटिरहने हामी जस्ता कार्यकर्तालाई निशेष गरिएको छ । सभापति देउवा त मात्र गुटको अभिभावक बने तर हामीलाइ पाटीको नेता चाहिएको छ ।
तर सभापतिले चुनाव हारेर आउनेले दोष देखाउन मिल्दैन भनिरहनुभएको छ नी ?
सम्पूर्णरुपमा आफ्नो राज्यसत्ताको प्रयोग गरेर आफु प्रधानमन्त्री बन्ने पार्टी सभापतिमा आफुमात्रै जितेर आएर शेरवहादुर देउवाले रामचन्द्र पौडेललाई हेपेर बोल्न मिल्छ ? उहाँले रामचन्द्र पौडेललाइ हराउन के के प्रपञ्च गर्नुभयो ? त्यो त कार्यकर्तालाई थाहा छ त । उहाँले बिभिन्न प्रकारको चलखेल गर्नुभएन ? देशभरी होनाहार कार्यकर्ताको शेखर कोइरालादेखि कसकसलाई हराउनुभएन ? रामचन्द्र पौडेललाई हराउन शेरवहादुर देउवाको ठूलो हात छ ।
पार्टी सभापतिले नै आफना नेतालाई हराए भन्नुभयो, चुनावमा हार खाएपछि जे मनलाग्यो त्यही भन्न मिल्छ ?
होइन, त्यो त प्रष्टै छ । उहाँ सरकारमा रहँदा, उहाँले नियुक्ति गर्दा हिजो पार्टीको साख गिरेको थियो । आज पनि गिरेकै छ । आज इतिहासकै सर्वनास अवस्थामा रह्यो ।
तर उहाँले त दुइपार्टीको एकताले चुनावमा हारेको दोहोर्याइरहनुभएको छ ?
यसमा म पूर्णरुपमा असमत छु । एक त हिजो कम्युनिष्टले नदेखेको बाटो आफु देखाइदिने । स्थानीय निर्वाचनमा राप्रपा बन्ने बाटोउन्मुख भइरहेको माओवादीको टाउकोको हाइट बढाइदिनुभयो । त्यसपछि अग्रगामी सम्झौता गर्ने बाटोपनि देखाइदिनुभयो । एक त दुइवटा ठुला पार्टी बन्ने बाटो हाम्रै सभापतिले देखाएको । त्यसैले उहाँमा दुरगामी राजनीतिक दृष्टि बनाउन पराजित हुनुभयो । अर्को, पार्टीको टिकट दिदा खेरी पाटीका कार्यकर्ता जनताको स्वीकार गर्ने कार्यकर्ता खटिएकोलाइ टिकट दिइएन ।
तर शिर्ष नेताले आ–आफनो स्थानबाट टिकट पाउदा पनि उहाँहरुले चुनाव जित्न त सक्नुभएन नी ?
यी सबै नेताले टिकट पाउँदा पार्टीभित्रको व्यापक असन्तुष्टिको बीचमा टिकट पाएका हुन् । हाम्रो चुनावमा के भयो भने एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि भोलि मलाइ फलानोले चुनाव जित्यो भने मेरो अवस्था के होला भन्ने अवस्था रह्यो । शिर्ष तहबाट नै निशेध गराउने खालको बातावरण बनेको थियो ।
अव के गर्नुहुन्छ त ?
जे जे नहुनुपर्ने हो त्यही हुन्छ । आजसम्म कहि पनि निरंकुशता टिकेको छैन । काँग्रेस राजा र राणा फालेर आएको पार्टी हो । पार्टीभित्रको अधिनायकवाद र निरंकुशताबिरुद्ध हामी लड्छौ । नेतृत्वले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ । होइन भने पार्टी सभापतिको राजिनामा पनि माग्छौं । विशेष अधिवेशन पनि माग भइसकेको छ । कार्यकर्तामुखी विधान ल्याउन सक्नुभएन भने उहाँको विकल्प खोज्नैपर्छ । साँच्चै गुटभन्दा माथि उठेर काँग्रेस बच्नुपर्छ । महाधिवेशनको माग गरिसकेका छौ । सभापति त्यसमा सकारात्मक हुनुपर्छ । कांग्रेसमा पार्टी चलाउन सक्ने नेतृत्व छन । ती नेतृत्वलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । पार्टीमा भएका त्रुटीको हिसाब किताव मागिनुपर्छ । आश र त्रासाबाट कार्यकर्ता अब मुक्त हुनुपर्छ ।
हिजो पार्टीमा आएर आर्थिक चलखेलमा राजनीति साट्न पाइदैन । आर्थिक चलखेल गर्ने व्यवसायमा हो । त्यसैमा सपोर्ट गर्न, व्रिफकेस हातमा लिएर पद बाँढ्न पाइदैन । यो डिपार्टमेन्ट स्टोरमा बेच्न राखेको चिज हैन । पार्टीको आन्तरिक कोष बृद्धि गर्न जरुरी छ । अहिले त के भइरहेको छ भने पार्टीको कोषाध्यक्षको पद मनोनित गर्नेमा पनि रस्साकस्सी भइरहेको छ । पार्टीको कोषाध्यक्ष मनोनित हैन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट चुनाव भएर आउनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसलाइ कार्यकर्ताले साहै आलोचना गरेको ब्रिफकेसको राजनीतिले पनि हो ।